Izindaba - Umehluko Phakathi KweHalogen, Hid And Led Headlights
Umehluko phakathi kweHalogen, Hid And Led Headlights
Kunezinhlobo ezintathu zamalambu aphambili ahlukene. Lezi zinhlobo zamalambu emoto amalambu nguHalogen, Xenon namaLED. Ngasinye sisebenza ngokuhlukile ngendlela esikhiqiza ngayo ukukhanya ngakho-ke sikhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zokukhanya emgwaqweni.
Amalambu e-Halogen empeleni amalambu asetshenziswa kakhulu ezimotweni eziningi. Ukusungulwa kwabo kubuyela emuva eminyakeni yama-1960 okwakuyisixazululo sokwenza ukukhanya ngezinsizakusebenza ezilinganiselwe. Njengezibani ze-incandescent, ama-halogen asebenzisa intambo evuthayo ye-tungsten ukukhiqiza ukukhanya. Umucu kodwa uvalelwe kubhabhalazi wegesi ye-halogen ngokungafani ne-incandescent, njengesinyathelo sokwenza ngcono impilo ende nokusebenza. Lezi zibani kulula ukuzenza okwenza inqubo yokukhiqiza ingabizi. Ngaphezu kwalokho izindleko zokushintshwa nazo ziphansi kakhulu. Amalambu e-Halogen angalingana nezimoto eziningi ezinamamodeli ahlukahlukene njengoba eza ngobukhulu obuhlukile nobubunjwa. Lezi zibani kodwa azihlinzeki ngokubonakala okuhle kakhulu njengama-white HID bulbs nama-LED. Kulahleke inani elikhulu lokushisa ngenkathi kusetshenziswa la malambu angaphambili bese kumosheka amandla. Ngaphezu kwalokho, zibuthakathaka kakhulu zidinga ukunakekelwa okwengeziwe ngokungafani nama-LED ne-HID
I-HID (Ukukhishwa Okuphezulu Kwamandla)
Baziwa kakhulu ngokukhipha ukukhanya okukhanyayo okufinyelela kude. I-tungsten yabo ifakwe kushubhu le-quartz eligcwele igesi le-xenon. Zingadinga amandla amaningi uma zivuliwe kepha zisebenzise kancane kakhulu kuzo ukugcina ukukhanya. Ngaphezu kwalokho, zinempilo ende uma ziqhathaniswa nama-halogen. Zingabonakala zingcono kepha futhi ziveza ukulinganiselwa okuthile njengokubiza kakhulu maqondana nokukhiqizwa nokufakwa esikhundleni. Akulula ukukhiqizwa kusuka kumklamo wabo oyinkimbinkimbi. Ukukhanya kwazo okukhanyayo kubangela ukungaboni ngamehlo komgwaqo ozayo ongathandeki futhi ongadala izingozi emigwaqweni.
I-LED (i-Light Emitting Diode)
Lokhu manje sekuyinto entsha futhi yakamuva kakhulu ethatha izintambo kwi-HID ne-Halogens. Ama-LED asebenzisa ubuchwepheshe bama-diode lapho akhiqiza khona ukukhanya lapho amandla kagesi ejabulisa ama-electron awo. Zidinga amandla aphansi namandla futhi zisakhipha ukukhanya okukhanyayo kunamalambu we-halogen aholela nasekukhanyeni kwesikhathi eside se-LED. Ama-diode awo angasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene ezinikeza ukumiswa okuhlukile. Ngobuchwepheshe be-LED, umbono uthuthuke kakhulu futhi ugxile kakhulu. Yize izindleko zokuqala ze-HID ne-halogen bulb zingaphansi kwama-LED, izindleko zokusebenza nokugcinwa kwe-LED ziphansi kakhulu. Ama-LED, anempilo ende, anciphisa izindleko zokugcinwa kwesondlo kanye namalambu. Ngoba ama-LED adinga ukushintshwa kancane, umnikazi usebenzisa imali encane kumalambu amasha futhi nabasebenzi badinga ukuwashintsha. Ama-LED nawo asebenzisa amandla amancane; ngakho-ke izindleko eziphelele zohlelo lwe-LED zingaba ngaphansi kakhulu kunalezo zezinhlelo zokukhanyisa ezivamile.
Lawula i-Arm Bushing, Isesekeli Esizenzekelayo, Clamping Element, Izingxenye ezisele, Uphawu Ingxenye, Abicah Rubber Seal,